China လေမှုတ်နိုင်သောကားလည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံးထိုးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ကွမ်းခြံကုန်း
ဝန်ဆောင်မှု:OEM / ODM
ပုံနှိပ်ခြင်းစိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်သည် Welcom ဖြစ်သည်
ထုတ်ကုန်အမည်:Air Breathable ကားလည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံး Inflatable
Air Breathable ကားလည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံး Inflatable
၁။ အလောင်းကိုအလွယ်တကူအနားယူရန်၊ အိပ်ပျော်ရန်နှင့်ကြာကြာအိပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အထက်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံးလုံးအထောက်အပံ့ပေးသောတစ်ခုတည်းသော Inflatable Neck Pillow Travel ဖြစ်သည်။
၂။ သင့်တော်သောခေါင်းနှင့်လည်ပင်းညှိခြင်းကိုမြှင့်တင်ပါ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားနေရသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၃။ အသက်ရှုနည်းနည်းလေးနှင့်အလွယ်တကူထိုးဖောက်ပါ။ ထုပ်ပိုးအာကာသ minimize လုပ်ဖို့လှိမ့်တဲ့အခါမှာသေသပ်စွာစတိုးဆိုင်များ။ ၄။ မူပိုင်ခွင့် ERGONOMIC ဒီဇိုင်းသည်တင်းမာမှုနှင့်လည်ပင်းတင်းမာမှုကိုကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။
၅။ ဘက်စုံ - လူကြီးများနှင့်ကလေးများ။ လေယာဉ်များ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ ရထားများ၊ ကားများ၊ စခန်းချခြင်း၊
လေထိုးနိုင်သောကားလည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံး inflatable: (၁) ပစ္စည်းများ - သိုးမွေးနှင့်ပျော့ပျောင်းသော felted flocking PVC ။ (3) ဘယ်နေရာပဲသွားသွားအိမ်အပြန်အနားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းအုံးဟာလည်ပင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးသင့်ကိုစိတ်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ (၄) မျက်နှာဖုံးသည်ဖြုတ်။ တပ်လို့ရသည်။ (5) အလွန်သေးငယ်ပြီးလွယ်ကူသောထုပ်ပိုး။ သငျသညျ daypack ၏ဘေးထွက်အိတ်ကပ်ထဲမှာပင်ထားနိုင်ပါတယ်။ (၆) Pro65 စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါ။
ဘာကြောင့် Aofeite ကိုရွေးချယ်ပါ။ ၁။ စက်ယန္တရားများနှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှိသောစက်ရုံအလုပ်ရုံ။ ၂။ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးတွင်အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများ။ ၃။ အလီဘာဘာရွှေပေးသွင်းသူ။ 4. ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအမှာစာနှင့် OEM အမိန့်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ၅။ အဆင့်မြင့်အရည်အသွေး၊ CE / FDA နှင့် ISO အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်။ 6. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အမြန်ပေးပို့, အားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ၇။ ကွဲပြားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း၊ LC, TT, Western Union, Money Grame နှင့် Paypal ။ ၈။ အာမခံသက်တမ်းနှင့်တစ်နှစ်စာဝန်ဆောင်မှု။ ၉။ ဖောက်သည်များနှင့်အတူတကွကြီးထွားရန်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒဖြစ်သည်။
စံပြကားလည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ လည်ပင်းအနားယူခေါင်းအုံးအားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကတရုတ်မူလအစလည်ပင်းခေါင်းအုံးထိုးဖောက်စက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
လည်ပင်းအားလျော့ကျစေသည့်လည်ပင်း Massager နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေး ဦး ခေါင်း ...
ပျော့ပျောင်းသော Air Inflatable Neck Cervical Traction ကိရိယာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလေထုသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ inflatable လည်ပင်းဆွဲဆောင်မှု ... ...
ပူပြင်း။ ချိန်ညှိနိုင်သော Cervical Neck Tractio ...